I-Galaxy A70 ngoku inokuthengwa eSpain ngokusemthethweni | I-Androidsis
Uluhlu oluphakathi lweSamsung lusishiye neefowuni ezininzi ezinomdla kulo nyaka. Enye yeemodeli zayo ezinamandla yiGalaxy A70, thaca ngokusemthethweni kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kungekudala emva kokunikezelwa kwayo kwabhengezwa izokuthenjwa nini le fowuni eSpain ngokusemthethweni. Ukuphehlelelwa okwenzekayo ngoku, esinokuthi sele siluthengile olu luhlu luphakathi lwenkampani eSpain.
Abo banomdla kule Samsung Galaxy A70 banokuyifumana. Kubekwa kwintengiso kwiwebhusayithi esemthethweni yomenzi waseKorea, nangona ayisiyiyo kuphela indawo onokuyithenga kuyo ngokusesikweni. Isixhobo esibizelwe ukunika imfazwe eninzi kumbindi ophakathi kwi-Android.
Ukuba siyithenga kwivenkile esemthethweni yakwaSamsung, i-Galaxy A70 inexabiso nge-399 euro. Nangona sinesipho kwangaxeshanye, ukusukela ngokuthengwa kwesixhobo singathatha iGalaxy Fit E, esinye sezacholo zeSamsung, eyasungulwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwimarike yaseSpain. Ke lithuba elihle.
Eli lixabiso kwiwebhusayithi esemthethweni. Nangona kunokubakho abasebenzisi andinamdla kule bracelet yohlobo lweKorea. Kwimeko yakho, sinokuyithenga nakwezinye iivenkile, kokubini kwi-Intanethi nakwiindawo zentengiso. Ke akuyi kuba nzima ukuthenga le modeli kwinkampani.
Kwakhona, kwezinye iivenkile ezinje ngeAmazon, Ixabiso lale Galaxy A70 liphantsi. Ke ngoko, kunokuba lukhetho olufanelekileyo ukuba ujonge ukugcina kancinci xa uthenga olu luhlu luphakathi lwegama laseKorea. Kwimeko yeAmazon, iza nayo Ixabiso le-379 euro, ke ngumahluko olungileyo lowo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, le fowuni inayo yonke into yokuthengisa kakuhle kwaye incede i-Samsung's middle-range ukuba ithengise ngcono. Kude kube ngoku, Olu luhlu lutsha lweGalaxy A luthengisa kakuhle, ngakumbi kwiimarike ezinjengeIndiya. Ke ngoko, ngokuqinisekileyo le Galaxy A70 yimpumelelo entsha kwinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy A70 isungulwe ngokusesikweni eSpain
I-League of Legends iya kuba nohlobo lwayo lwee-smartphones